शिक्षक कि राजनीतिकर्मी ? | EduKhabar
शिक्षक कि राजनीतिकर्मी ?
काठमाडौँ, १ असार । विद्यालयमा शिक्षक, पार्टीमा नेता । कक्षाकोठा र पार्टी कार्यालय दुईतिर खुट्टा हालेका शिक्षकले शिक्षा विधेयक आठौँ संशोधनपछि एउटा खुट्टा झिक्नुपर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट शनिबार पारित विधेयकले अब शिक्षकलाई खुलेआम राजनीति गर्न रोकेको छ ।
शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सामान्य सदस्य बन्न बाहेक कुनै कमीटिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि दुईतिर सक्रियहरुमा तरंग ल्याएको छ। जाजरकोट एमालेका उपसचिव प्रेमप्रसाद घर्ती नेपाल राष्ट्रिय निमावि समाकोटमा पढाँउछन् । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकपछि राजनीति छाड्ने वा शिक्षक उनी दोधारमा परेका छन् ।
इन्द्रज्योती माध्यामिक थालारैकरका प्रधानाध्यापक नरेन्द्र शाही र जनविकास प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक कविता जैसी पनि जिल्ला कमीटि सदस्य छन् । यस्तै, विजय मावि छिप्रेनाका कमल चन्द र नारायणी उच्चमाविका इलमबहादुर कांग्रेस महासमिती छन् । उनीहरु पनि शिक्षा विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि के गर्ने भन्ने दोधारमै छन् ।
रामजानकी प्राथमिक विद्यालय इउरीका शिक्षक नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य र हिमालय प्राथमिक विद्यालय मजरकोटका भीमबहादुर रावत जिल्ला कमीटि सदस्य छन् ।
यी उदाहरण मात्रै हुन् । हरेक पार्टीका जिल्ला स्तरीय भेला, बैठक वा सम्मेलनमा शिक्षकहरुको ठुलै भीड देख्न पाइन्छ ।
प्रकाशित मिति २०७३ असार १ ,बुधबार